​चेलीबेटी ताक्नेलाई किन च्यापेको « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७५, शुक्रबार १२:५३
राजेन्द्र क्षत्रीले सेनापति भएपछि सामाखुसीस्थित पुख्र्यौली घरबाट तीन दाजुभाइ (जर्नेल रमिन्द्र, कर्णेल रतिन्द्र र व्यापारी रविन्द्र) लाई अन्यत्र विस्थापित बनाई जंगी अड्डा, महांकाल अस्पताल, फास्ट ट्र्याक निर्माण एवं देशव्यापी कामधन्दाबाट अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याए । त्यही रकमबाट शशिभवनस्थित सेनापति निवासजस्तै करिब २५ करोडको निजी महल निर्माण गरे । झम्सीखेलमा २० करोड बराबरको घरजग्गा किने । हेटौंडामा करोडौं पर्ने घर र अमेरिकामा दुई तले घर खरिद गरे । अवकाशकै मुखमा गौरव तण्डुलजस्ता जर्नेललाई सम्भार रथी बनाई २५ हजार मिटरको २० करोडभन्दा बढी मूल्यको निम्न गुणस्तरको चुस्ता र सिपाहीका लागि करोडौं खर्चेर पानी छिर्ने रेनकोट किने ।
सेनाको भर्ना, क्याडेट भर्ना, प्राविधिक भर्ना, स्टाफ कलेज, एनडीसी, सैनिक सहचारीलगायत छनोटमा श्रीमती रीताको ठाडो हस्तक्षेप भयो । उनको कार्यकालमा एनडीसी स्थापनालगायत सेनाको पेशागत क्षेत्रमा विस्तार गर्न कुनै सुधार भएन । इण्डियन इन्सासजस्ता काम नलाग्ने हतियार विस्थापन गर्न कुनै प्रयास गरेनन् । ठेक्कापट्टामा बेरोजगार छोराहरू हावी भए । १२० केजीका, शारीरिक रूपमा अनफिट भतिजा आश्रय क्षेत्रीलाई विदुर अधिकारी र जितबहादुर तामाङजस्ता कर्णेललाई लेख्न लगाएर लप्टन बनाए । महिला सैनिक र अर्काकी श्रीमतीमाथि यौनशोषण गर्नेहरूलाई कारवाहीको सट्टा पुरस्कार दिए । आसेपासेलाई दुई–तीन महिना आफ्नो कार्यालयमा काजमा झिकाई तीन वर्षको अवधिमा ३० जनाजति कप्तान र मेजरहरुलाई शान्ति सेना र सैनिक पर्यवेक्षकमा पठाए । फास्ट ट्र्याक प्रमोशनले सेनाको रेजिमेन्टेसनलाई नै खतरा पु¥याउँदासमेत त्यसलाई परिमार्जन गर्न वास्ता गरेनन् । राजदल र जगदल पल्टनलाई मात्रै आफ्नो सम्झिए । सेनापति बहाल छँदै आफ्नो निजी निवास निर्माण गरेको सायद यो नै पहिलोपटक होला ।
क्षत्रीलाई पाकिस्तान सरकारले निशान–ए–इम्तियाज भन्ने ठूलो विभुषण दिएको छ । यो विभुषण यसअघि राजा महेन्द्रले पाएका थिए । भर्खरै पाकिस्तानी सेना प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्दा भने क्षत्रीले कुनै विभुषणबाट सम्मान गर्न आवश्यक ठानेनन् । यसबाट उनको सैन्य कूटनीति कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
सेनाभित्रका विभिन्न पक्षले नवनियुक्त पूर्णचन्द्र थापालाई पनि अप्रिय बनाउन सक्ने सम्भावना छ । आफ्नो पल्टनलाई मात्रै माया गर्ने, अरु पल्टनप्रति औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने मनस्थिति त्याग्नु राम्रो होला । सेनापतिका धर्मपत्नी, बुवा, छोरीज्वाईं, दाजु, ससुराली, सम्धी आदिबाट सेनाभित्रका काम–कारवाहीमा दख्खल पुग्ने काम नहोस् । एआईजी मदन खड्का छोरीतर्फका सम्धी हुन् । उनी प्रहरीका बद्नाम अफिसर भएकाले सेनापतिको नाम बिकाउने काम हुन सक्छ । सेनापति १६ बेसिकका अफिसर हुन् । साथी सेनापति भएकोमा आफ्ना बेसिक खुसी हुनु स्वाभाविक नै हो, उनीहरूलाई नियमसम्मत हेरविचार गर्दा आफ्नो टिकाटिप्पणी नहोस् । तत्कालै एनडीसी खुलोस् । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्नेछ । मित्रराष्ट्रका सेनासँग विपद व्यवस्थापन, सीमा वारपार अपराध नियन्त्रण, प्रतिआतंवाद, शान्तिसेनालगायत क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गर्दा राष्ट्रिय कूटनीतिलाई सहयोग पुग्न सक्छ । शान्तिसेनामा जाने फौजको संख्या बढाउनुहोस् । डिपिकेओमा नेपाली सेनाबाट सैनिक सल्लाहकार पठाउन सरकारलाई कूटनीतिक लबिङ गर्न लगाउनुहोस् । कल्याणकारी कोषमा मनपरी नगर्नुस्, मह काढ्नेले हात चाट्ने कुरा माफी गल्तीमा पर्छ । सैनिक अस्पताललाई चुस्त पार्नुहोस् । भूतपूर्व सैनिकहरुलाई राहत दिनुहोस् । इन्सास राइफललाई तत्कालै विस्थापित गर्न पहल गर्नुहोस् । मद्दती हतियार पुर्ताल गर्नुहोस् । सुन्दरीजल आर्सनलमा राम्रो कमाण्डर राख्नुहोस् । कर्णेल सञ्जय श्रेष्ठ फिट छैनन्, उनले लघुउद्योगमा ब्रह्मलुट गरेका हुन् । चोरलाई चौतारो किन ? महिला सैनिक र अर्काकी श्रीमतीको शोषण गर्ने जर्नेल–कर्णेलमाथि निगरानी राख्नुहोस् । यिनीहरुको पुरानो रेकर्ड हेर्नुहोस्, म्याद नथप्नुहोस्, प्रमोसन नगर्नुहोस् । राजेन्द्रले जस्तै महिला सैनिक र अर्काकी श्रीमतीको शोषण र बहुविवाह गर्ने जर्नेल–कर्णेललाई कमाण्ड दिने, म्याद थप्न सिफारिस गर्ने (जस्तै प्रह्लाद थापा), विभुषण (जस्तै भुवन अधिकारी) दिनेलगायत सेनाको सिद्धान्तविपरीत कामलाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस् ।
एनडीसी खुलाउँदा पेशेवर पूर्वजर्नेलहरुको सल्लाह लिन सकिन्छ । पूर्ण सिलवाल हजुरका बहिनीज्वाईं भएकाले अफिसरहरू उनको चाकडीमा लाग्न थालेका छन् । द्वन्द्वताका डडेल्धुरा बासुलेकमा हतियार बुझाउने दामोदर थापालाई शान्तिसेनाबाट हटाउनुहोस् । शान्ति सेनामा एनडीसी गरेका जर्नेल ल्याउनुहोस् । स्टाफ कलेज र वार कलेजमा पूर्व इन्स्ट्रक्टर अफिसरहरुलाई नियुक्त गर्दा राम्रो होला । सिके राउत र विखण्डनवादीहरुप्रति सूक्ष्म निगरानी राखी सोहीबमोजिम सरकारलाई सुझाव दिन राम्रो होला । सुरक्षा परिषदलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुहोस् । गौरवसमशेरले संगठन र भर्नामा पैसा खाने ताजमान बस्नेत र प्रकाश बोगटीहरुलाई, राजेन्द्रले तारा कार्की, भरत खड्का, अरुण घलेजस्तालाई मानार्थ उपरथी बनाए, यिनीहरुले त्यस्तो राम्रो काम के गरेछन् ? पूर्व जर्नेल, कर्णेलहरुलाई कल्याणकारीमा करारमा नियुक्त गर्दा उनीहरुले विगतका योगदानको आधार लिइयोस् । जर्नेल विजयध्वज कार्की, रुद्रबहादुर पौडेलहरूको योगदान के छ ?
खेलकुदमा योगदान दिने रेकर्डहोल्डर पूर्वसैनिकहरु खान नपाएर भौंतारिइरहेका छन् । त्यस्तालाई खोजीखोजी सैनिक स्कुलहरुमा करारमा लिनु राम्रो होला । वीरगति प्राप्त र असक्तहरुलाई अझै सुविधा दिनुहोस् । इञ्जिनियरिङ र मोबिलिटी क्षेत्रमा विस्तार गर्न पहल गर्नुहोस् । क्यान्टोनमेन्ट अवधारणामा आधारित सैनिक आवासहरु निर्माण गर्न सकिन्छ कि ? जर्नेल राजेन्द्र कार्कीकी श्रीमती सरिताले सेनापतिकी पत्नी मेरी दिदी हुन् भन्दै श्रीमती संघमा निकै चुरिफुरी गर्न थालेकी छन् । यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुहोला । हाम्रो रक्षानीति र सैनिक रणनीति छैन । रक्षा मन्त्रालयबाट रक्षानीति र जंगी अड्डाबाट सैनिक रणनीति निर्माण गर्न पहल गर्नुहोस् ।
– फास्टट्र्याकपीडित प्रमुख सेनानीहरू